နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများ၏ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ ~ Nge Naing
နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများ၏ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ
Monday, May 24, 2010 Nge Naing9comments
နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ် သူနာပြုများ၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေသည် ယခုနှစ်များအတွက် လစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့်အတူ ယခင်ကထက် များစွာ မြင့်မားလျက် ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း သူနာပြုများတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Essay တွင် နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်ရှိ သူနာပြုများ၏ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင် အခြေအနနှင့် ဖက်ဒရယ် အစိုးရက ပါလီမန်မှာ တင်သွင်းထားပြီး အတည်မပြုရသေးသည့် ဥပဒေအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူနာပြုများတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။ သူနာပြုများသည် အလုပ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး၊ လုပ်အားခမတူညီမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုံခြုံစိတ်ချရမှု ( Job security) ကို ဖျက်သိမ်းမည့် လက်ရှိ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ တင်သွင်းထားသော ဥပဒေအသစ်၏ ခြိမ်းချောက်မှုများသည်လည်း သူနာပြုများ အမှန်တကယ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် သူနာပြုများအနေဖြင့် မိမိတို့ ရရှိထားသော အခြေအနေ (Status) ဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ မတူကွဲပြားသည့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် အရည်ချင်းတူသော်လည်း လစာမတူဖြစ်နေသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးနှင့် ပုံမှန်ထက် ပိုမိုနေသော အလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချနိုင်ရေးတို့အတွက် ဆက်လက်၍တိုက်ပွဲ ၀င်လျက် ရှိပါသည်။
နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်မှာ ရှိသော မတူသည့် အလုပ်ရှင်များ လည်ပတ်နေသည့် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းခွင်များမှ သူနာပြုများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင် အဆင့်အတန်းနှင့် လစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများ အစည်းအရုံး (NSWNA) မှာ ပါဝင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်လျက် ရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည် သူနာပြုများ၏ ဘ၀မြင့်မားရေးအတွက် Campaigns အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်သမားသမဂ္ဂနဲ့အတူ လုပ်ရှားမှုပေါင်းများစွာမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ပင် အပြုသဘောဆောင်သည့် တိုက်ပွဲရလဒ်များကို သုံးလေးနှစ်စာ ရရှိထားပါသည်။ အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနရှိ သူနာပြုများအတွက်သက်သက် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀-၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း လက်ရှိအခြေခံလစမှ ၃၉.၅% အထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံရပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး သူနာပြုများအတွက် ၂၀၀၄-၂၀၀၆ အထိ ၂၅% နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများရှိ သူနာပြုများအတွက် ၃.၅% တိုးမြှင့်ပေးရန် သဘောတူထားခြင်း ခံထားရသည်။
ထို့အပြင် သက်ကြီးရွယ်အို စောက်ရှောက်ရေးနှင့် အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနရှိ သူနာပြုများတွင် သီးသန့် တက်ရောက် သင်ကြားထားသော အောင်လက်မှတ် (Additional educational qualification) ရှိသူများအား တပတ်လျင် ဒေါ်လာ ၃၀ အထိ အပိုရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အစိုးရကျန်းမာရေးဌာန သူနာပြုများအတွက် အမှုထမ်းသက်တမ်း ၁၀ နှစ် ကြာမှ ပေးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်ရှည်အားလပ်ရက် လစာ (Long Service Leave) ကိုလည်း ၇ နှစ်သို့ လျှော့ချ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီး ကလေးမွေးသည့် သူနာပြု မိခင်များအတွက် နို့သက်ကာလ အားလပ်ရက်ကို ကိုးပတ်မှ ၁၄ ပတ်အထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအောင်မြင်မှုများ အားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများနှင့် သူနာပြုများ အစည်းအရုံး (NSWNA) အကြား လတ်တလော သဘောတူညီချက် ရထားသည့် ရလဒ်များပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဖက်ဒရယ်အစိုးရ တင်သွင်းထားသော ဥပဒေသစ်ကို တရားဝင် အတည်ပြုလိုက်မည် ဆိုပါက ထိုအောင်မြင်မှုများအပြင် နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်အစိုးရ ပေးထားသည့် အခွင့်အရေများ (NSW state award) အားလုံးကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရက မကြာခင် ပြန်လည်သိမ်းယူသွားမည်ကို အထူး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေပါသည်။
သြစကြေးလျား လုပ်ငန်းခွင် သဘောတူညီချက် (AWA) ဟုခေါ်သည့် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ လတ်တလော တင်သွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းခွင် ဥပဒေသစ်သည် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများမှ မည်သို့မှ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်၍ မရနိုင်သည့် အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင် တသီးပုဂ္ဂလ စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံပါသည်။ ယင်းဥပဒေကို ၁၉၉၇ မှာ လစ်ဘရယ်အစိုးရက စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အလုပ်သမာား ၇ သိန်းခန့် ယင်းဥပဒေအောက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လေ့ ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းဥပဒေသည် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်လာမည်ဆိုပါက သူနာပြုများနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန တခုလုံးအတွက် ဆိုးကျိုးများစွာ သက်ရောက်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး အချက်အနေဖြင့် ဥပဒေသစ်ကို အတည်ပြုဖြစ်သွားခဲ့သော် လက်ရှိ နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများ ရရှိထားသည် အခွင့်အရေးများ အားလုံးနှင့် ယခု တိုက်ပွဲဝင်၍ ရရှိထားသော အခွင့်အရေးများ အားလုံး ရုပ်သိမ်းခံရနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ လက်ရှိ တိုက်ပွဲဝင်၍ ရရှိသော အခွင့်အရေးများကို အထက်၌ ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
လောလောဆယ် NSW Industrial Relation Law အရ နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြု အခွင့်အရေးများမှာ အလုပ်သက်တမ်းအလိုက် နှစ်အတိုင်းအတာ တခုအထိ လစာနှစ်စဉ် ပုံမှန်တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ Overtime Payment, စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် ညပိုင်းလုပ်အားခကို အခြေခံနှုန်းအပြင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပိုမိုရရှိခွင့်၊ နှစ်စဉ် အားလပ်ခွင့်ရက်၊ နို့သက်ကာလ အားလပ်ခွင့်ရက် စသည်တို့ကို ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ဥပဒေသစ်အရ ၎င်းအခွင့်အရေးများနှင့် အခုတိုက်ပွဲဝင်၍ ရရှိထားသော အခွင့်အရေးများသည် လုံးဝသေချာ ရေရာမှု ရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ ဥပဒေသစ်ကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အခြေအနေသည် အလုပ်ရှင်များအပေါ်တွင်သာ အများဆုံး မူတည်သွားပေလိမ့်မည်။ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် သူနာပြုများမှာ အလုပ်လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိတော့သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ မပျော်ပိုက်သော်လည်း အလုပ်ရှင်များ တောင်းဆိုသော စာချုပ်ကို မတရားသည့်တိုင်အောင် စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ငွေရေးကြေးရေး လိုအပ်ချက်အတွက် လက်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး လုပ်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့ မဖြစ်လာစေရန် သူနာပြုများအတွက် NSW Industrial Relation Law ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ သူနာပြုများသည် တက္ကသိုလ်များတွင် Professional Study ကို သင်ကြားထားသူများဖြစ်သော်လည်း တခြား အစိုးရဌာနများမှ ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်သည့် ကျောင်းဆရာ၊ စာရင်းကိုင် စသည် ၀န်ထမ်းများထက် အခြေခံလစာမှာ ပိုနည်းသောကြောင့် လူတကာ အနားယူသည့် စနေတနင်္ဂနွေ၊ ညဘက်၊ အချိန်ပို အလုပ်များမှ ပိုရသည့် လစာကို အားကိုးပြီး အိမ်ထောင်စု လိုအပ်ချက်အတွက် လိုအပ်နေသော ၀င်ငွေကို ဖြည့်ဆည်းရပါသည်။ အကယ်၍ ဥပဒေအသစ်ကို အတည်ပြုပြီး တသီးပုဂ္ဂလ စာချုပ်အရ ပိုရသည့်အချိန်ဟူ၍ မရှိတော့ဘဲ မည်သည့်အချိန်မှာလုပ်သည်ဖြစ်စေ လစာအားလုံး အတူတူ ဖြစ်သွားပါက လူတကာ အနားယူသည့် အချိန်တွင် မည်သူမှ ပိုက်ဆံပိုမရဘဲ အလုပ်လုပ်ချင်ကြမည် မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် မိမိတို့ မိသားစုနဲ့ ကောင်းစွာ အပန်းဖြေ အနားယူချင်ကြသည်ချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ လစာပိုမရဘဲ ထိုအနားယူချိန်များတွင် မည်သူမှ မလုပ်ကြသည့်အခါ ဆေးရုံများတွင် သူနာပြု မလုံလောက်သည့် အန္တရယ်သည် ကြီးမားသော ပြဿနာတရပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူနာပြု အလုပ်သည် တရက်မှာ ၂၄ နာရီလုံး၊ တပတ်မှာ ခုနှစ်ရက်လုံး လိုအပ်နေသည့် အလုပ်ဖြစ်ပြီး သူနာပြု မလုံလောက်ပါက ပြည်သူလူထုအတွက် ကြီးစွာသော ဒုက္ခကို ရစေနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာပင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သူနာပြုများအတွက် အလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ပြဿနာကို ဖြေရှင်း၍ မပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာ ဥပဒေသစ်ကိုသာ အတည်ပြုလိုက်ပါက လုပ်ငန်းခွင်အခြအနေသည် ငါးပါးမှောက်ရန်သာ (မြန်မာမှုပြုထားသည်) ရှိတော့သည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် နယူးဆောက်ဝေး လုပ်ငန်းခွင် ဥပဒေအရ သူနာပြုများ လိုက်နာရန် Occupational Health & Safety Policy ရှိနေသည့်တိုင် အပြည့်အ၀ မလိုက်နာနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး မည်သည့် ဥပဒေမှ အတိအကျ ပြဌာန်းပါရှိမည် မဟုတ်ဘဲ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင် နှစ်ဦးသဘောတူအရ လုပ်ရမည့် ဥပဒေအသစ်မှာ သူနာပြုများကို အာမခံချက်ပေးထားသည့် အချက်ဟူ၍ တိကျရေရာမှု ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ Unresonable work load သည် ယခုထက် ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပြီး လူနာများအတွက် Quality Care ဆိုသည်မှာ ရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မဖြစ်သင့်ဘဲ မတော်တဆ ထိခိုက်အနာတရမှုနှင့် အသေနှုန်း တက်လာပြီး အားထားလောက်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ သူနာပြုများသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကျေနပ်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့သာ နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကို စိတ်ကုန်သည့် အတွေ့အကြုံများနှင့်သာ ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့နေရပေမည်။ နောက်ဆုံး အဆုံးစွန်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်သည်မှာ သူနာပြုများသည် မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်ပြီးသော ပညာရပ်ကို စွန့်ခွါသွားပြီး တခြားပြင်ပအလုပ်များကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်သွား နိုင်သည့်အတွက် သူနာပြုမလုံလောက်သည့် ပြဿနာကို ပိုမို ကြီးထွားသွားစေနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဌာန၏ အရေးကြီးဆုံး အဓိကအလုပ်သမားများ ဖြစ်သည့် သူနာပြု မလုံလောက်ပဲ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းခွင်တခုဟာ မည်သို့မှ ကျန်းမာလုံခြုံစိတ်ချစွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်တော့ပါ။ သူနာပြုမရှိဘဲ (သို့) မလုံလောက်ဘဲ ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးကို မဆာင်ရွက်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကို အတည်မဖေါ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။
နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်တခု အရေးကြီးစွာ ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာ တခုမှာ Qualification တခုတည်းကို ကိုင်ဆောင်ထားသော သူနာပြုများသည် မတူကွဲပြားတဲ့ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာ လစာမတူကြသည့် ပြဿနာပင် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး သူနာပြုများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများမှ သူနာပြုများသည် ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် အစိုးရဌာနမှ သူနာပြုများထက် လစာပိုနည်းနေပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများ အစည်းအရုံး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Mr Brett Holmes နှင့် ဒုတိယ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Ms Judith Kiejda နှစ်ယောက်စလုံးက သုံသပ်သည်မှာ အစိုးရဆေးရုံနှင့် ဌာနများအောက်တွင် လုပ်နေသော သူနာပြုများ၏ အစည်းအရုံးတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် အရေအတွက်က တခြားလုပ်ငန်းခွင်များမှ သူနာပြုအရေအတွက်ထက် ပိုများပြီး လစာတိုးမြှင့်ပေးမှု ကွာဟနေခြင်းမှာ ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် သူနာပြု အရေအတွက် မတူသည့်အပေါ်တွင် အများဆုံးမူတည်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုစကားသည် ပါဝင်မှု၊ အားထုတ်မှု နည်း၍ အခွင့်အရေးရနည်းသည် ဆိုသည့်အချက်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် သူနာပြုများအတွက်သာမက အခွင့်အရေးတခုကို လိုချင်၍ တိုက်ပွဲဝင်နေသူ အားလုံးနှင့်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ နယူးဆောက်ဝေးမှာ သူနာပြုများ အရည်အချင်းတူပြီး လစာမတူညီကြသည့် ပြဿနာကား ဆက်လက် ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာ တခုအဖြစ် ဆက်ရှိနေပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် လတ်တလော တိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံထားရသော အခွင့်အရေးများဖြင့် နယူးဆောက်ဝေး သူနာပြုများသည် အလုပ်အခြေအနေ ခါတိုင်းထက် အမြင့်မားဆုံး အခြေအနေမှာ ရောက်နေသော်လည်း အခက်အခဲများနှင့် ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာများ၊ ခြိမ်းချောက်မှုများ များစွာ ဆက်ရှိနေသေးသည်။ အဓိက ခြိမ်းချောက်မှုမှာ ဖက်ဒရယ်အစိုးရတင်သွင်းထားသော ဥပဒေအသစ် ဖြစ်သည်။ သူနာပြုများတွင် မတူကွဲပြားသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လစာမတူသည့် ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရသလို နေရာတိုင်းတွင် အဆမတန် အလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ရှိနေသည်။ သူနာပြုများ အချင်းချင်းအကြား လစာမညီမျှသည့် ပြဿနာကို ညီညွတ်စွာ ဖြေရှင်းရန် မတူကွဲပြားသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရှိသော သူနာပြုများအားလုံး သူနာပြုအစည်းအရုံးမှာ ပိုမိုပါဝင်လာပြီး မိမိတို့အခွင့်အရေးများကို ညီညွတ်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထိုဖက်ဒရယ် အစိုးရတင်သွင်းထားသော ဥပဒေသည် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးအား ဆိုးကျိုးများကိုသာ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် လုပ်သားပြည်သူများအကြား အသိပေးနိုးဆော်ပြီး ထိုဥပဒေကို အတည်မပြုဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရန်လိုနေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဆမတန် အလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ဖြေရှင်းရန် NSWNA နှင့် Health Department ပူးပေါင်းကာ အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေး ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်နေသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသင့်ပေသည်။ ပြည်သူလူထုများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Safe and quality care ဖြစ်ဖို့အတွက် သူနာပြုများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပြီး သူနာပြု မလုံလောက်သည့် ပြဿနာဖြစ်ပါက သူနာပြုများတွင်သာ နစ်နာမည် မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုမှာပါ နစ်နာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း NSW, Industrial Relation Law ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အခုတင်သွင်းထားသော ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ ဥပဒေအသစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် Campaigns မှန်သမျှတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲသင့်ပါသည်။
(၂၀၀၆ ခုနှစ်က High School အဆင့် ပညာရေးကို ပြန်တက်စဉ်က ၁၁ တန်း (မြန်မာပြည် ၉ တန်း) အဆင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာမှ Working conditions and wokpalce situations for nurses in NSW အမည်ဖြင့် ကျွန်မ ရေးခဲ့တဲ့ Essay ကို မလိုအပ်တာတချို့ ဖယ်ပြီး သင့်လျှော်သလို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ကြားနေသူမှ မဟုတ်ဘဲ အခြေခံပညာအဆင့်မှာလည်း Assignment တွေမှာ မိမိမြင်တွေ့နေရသည်များကို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်ကြောင်းကို မျှဝေလို၍ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Essay ကို အမှတ် ၂၀ ပေးတဲ့အနက် ကျွန်မ ၁၈ မှတ် ရခဲ့ပါတယ်)
Posted in: Australian society and environment,Nursing (သူနာပြု),ကျန်းမာရေး/ဇီဝသိပ္ပံ,ပညာရေး
May 24, 2010 at 1:33 AM Reply
အချိန်မရတဲ့ကြားတဲ့က စာဖတ်သူတွေအတွက် ပို့စ်လေးတွေကို ဂရုတစိုက် အဆက်မပြတ် တင်ပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အဲဒီလိုနိုင်ငံက သူနာပြုတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်တော့ စင်္ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာသူနာပြုလေးတွေက
ပိုပြီး ဆိုးပါတယ်အမရယ် ။ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ လုပ်တဲ့ သူနာပြုလေးတွေတစ်လမှာ S$350 လောက်ဘဲ ရကြတယ် ။
စင်္ကာပူကသူနာပြုလေးတွေအဲဒီလို စုစည်းပြီး တောင်းဆိုကြရင်ကောင်းမယ်နော် ။
please also post the original essay ( English ) that we can learn English also.Thanks
May 24, 2010 at 12:59 PM Reply
May 24, 2010 at 10:04 PM Reply
မြန်မာပြည်က သူနာပြုဆရာမတွေ ရဲ့ဘဝ နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ မိုးနဲ့ မြေပါပဲ မငယ်နိုင် ။
ရတဲ့လခ က ခရီးစရိတ်တောင် မကာမိတော့ ကြားပေါက်တွေ ရှာရတော့တာပေါ့ ။ ရှားပါးစရိတ် ၊ ဆိုတာ လည်း ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက် သလို ပဲလေ။
အလုပ်ရှင် နဲ့ အလုပ်သမား ကြားထဲ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ကို ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း လို့ ရတာ က ပဲ အများကြီး ကောင်းနေပါပြီ ၊ လစာ တိုးနှုန်း ၃၉.၅% ဆိုတာ အတော်များပါတယ် ။
May 25, 2010 at 12:29 AM Reply
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပို့စ်တင်ပြီး နောက်နေ့မနက် အလုပ်သွား အလုပ်က ပြန်တော့ ကျောင်းသွားတာနဲ့ ပြန်လှည့်မကြည့်ဖြစ်တာ အခုမှပဲ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
Anonymous ရေ မူလ Essay က in text reference တွေနဲ့ ပြီးတော့ စာဖတ်သူတွေအတွက် အရေးမပါတဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေလည်း ပါတော့ ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနာပြုတွေဟာ မိမိတို့အခွင့်အရေးအတွက် ဘယ်လိုတောင်းဆိုပြီး အစိုးရပေါ်လစီတခု တင်လာတိုင်း အတည်မပြုခင် ဒီလိုကန့်ကွက် ရှုပ်ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Message ကိုပဲ ပေးချင်လို့ လိုတာကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်တယ်။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 25, 2010 at 12:32 PM Reply
Re : Anonymous
Anyway, I have some good excercises for you.
Ok, repeat me ...
This isabook. Ok? repeat me again!
This isabook. Alright?
Then lets go to another excercise...
May 25, 2010 at 1:19 PM Reply
aubergine: I have just read your latest post- the situation of nurses in NSW. I can also view the motive behind the post. It is an unnecessary act that you mentioned the mark you gained. So cocky!!
25 May 10, 12:43
aubergine: You have all your rights to share your thoghts and feeling with people over your blog. But you should not be so boastful. No one can guarantee that the post is your genuine product.
25 May 10, 12:47
aubergine: Please just share your thoughts and opinion. I'd like to request not to be too boastful. This comment may bealittle harsh but it is justapositive criticism.
(ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်နေလို့ C-Box ထဲက ကူးလာပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။)
ကျွန်မက ဒီလိုရေးလို့ အမှတ်မလျှော့သွားဘူး၊ စာမေးပွဲလည်း မကျဘူး၊ အဖမ်းလည်းမခံရဘူး ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကို ပြောလိုတဲ့ အနေနဲ့ ဖေါ်ပြလိုက်တဲ့အပေါ် တမျိုး သဘောပေါက်သွားတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး aubergine ။ ကျွန်မဆီမှာ စာလာဖတ်နေသူတွေဟာ အတွေးအခေါ် လွတ်လပ်ခွင့် လုံးဝမရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ အလျှံအပယ် ရှိတဲ့နေရာကအထိ အစုံရှိလို့ အားလုံးနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေဖို့ဆိုတာ သိပ်ကို မလွယ်ပါဘူး။ အပြင်မှာ ရောက်နေသူတယောက်က ဒါကို ကြွားတယ်လို့ မြင်နိုင်ပေမဲ့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့သူတဦးအနေနဲ့ ဖတ်ရင် မြန်မာပြည်က ကိုးတန်းမြန်မာစာ (သို့) အင်္ဂလိပ်စာ စာစီစာကုံးတခုမှာ ဒီလို တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို သွားရေးလို့ အမှတ် ၉၀% ရဖို့နေနေသာသာ ကျောင်းထုတ်ပစ်မခံရတာတောင် မနည်းကံကောင်းဆိုတာ တွေးမိမှာ ဖြစ်တယ်။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ Message ပေးတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်မဖေါ်ပြတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေထည့်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို လက်မခံပေမဲ့ aubergine ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ Clarification ကိုလည်း အလေးအပေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ကိုလည်း အကြံပြုပါတယ်။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လာဖတ်ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
May 26, 2010 at 12:39 AM Reply
စင်ကာပူ ရောက်နေတဲ့ သူနာပြုများ ရဲ. လစာ S$ 350 နဲ. ပတ်သက်လို. ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်၊လစာတော့ နည်းပါးတယ်၊ မြန်မာ အခေါ်အရ သူနာပြု ဆိုပေမဲ့ သူနာပြုများ မှာ healthcare assistant, staff nurse (SN), senior staff nurse (SSN) ၊ အရင်က sister လို. ခေါ်တဲ့ nurse manager ဆိုတဲ့ အဆင့် များစွာရှိပါတယ်၊ လစာက အဆင့်ဆင့် ကောင်းကြပါတယ်၊ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာ က ဆေးရုံ က sponsor ကိုယူပြီး advance nursing course ကို ဆက်တက်သင့်ပါတယ်၊ တစ်ချို. မြန်မာ nurse များ (မြန်မာပြည် နှင့် စင်ကာပူ မှာ ကျောင်းပြီးသူများ အပါအ၀င်) ၊ လစာကောင်းကြပါတယ်၊ သူနာပြု အလုပ် ဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်အပြင် ကိုယ့်မှာ အရည်အချင်းရှိနေရင် U.K, Australia တို.မှာ အလုပ်ရနိုင်ပါတယ်၊
မောင်စူပါရေ - ကျွန်မဘလော့ဂ်က အစုံရေးတဲ့ဘလော့ဂ် ဖြစ်သလို ကျွန်မကလည်း စာစုံ ဖတ်ပါတယ်။ ဒီတေ့ ကျွန်မဘလော့၈်ကို ရဟန်းရှင်လူ အစုံရောက် သလို ကျွန်မကလည်း ဘလော့ဂ်အစုံကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီတော့ မောင်စူပါ မမြင်ချင်ရင် ဘလော့ဂ်မဖတ်ဘဲနေမှပဲ ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မိမိအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့စာတွေကို ဆက်မဖတ်ပါနဲ့။ ကျွန်မ ဒါပဲ အကြံပေးလို့နိုင်တယ်။